धातु डिटेक्टर - iSearch
सुरु बगैचा बगैंचा उपकरण र उद्यान उपकरणहरू मेटल डिटेक्टर
1 मेटल डिटेक्टर के हो?
2.1 PI प्रविधि
2.2 AC वर्तमान मापन
3 धातु डिटेक्टरहरूको भिन्नता
3.1 सस्तो मोडेलहरू
3.2 Upscale मूल्य दायरा
4 स्पष्ट रूपमा पहिचान योग्य फाईलहरू
5.1 पानी मा पानी र पानी को तहत शिकार
6 एक रोचक र विविध शौकको रुपमा धातु डिटेक्टर
7 खोजी उपकरणहरूको सही प्रयोग
9 डीलरमा इन्टरनेट वा साइटबाट किन्नुहोस्?
9.1 विशेषता पसल किन्नुहोस्
9.2 इन्टरनेटमा खरिद गर्नुहोस्
11 खजाना हेर्न कहाँ छ?
मेटल डिटेक्टर के हो?
नाम मूलतः यसो भन्छन्: एक मेटल डिटेक्टर धातुहरू संकेत गर्दछ। धातु डिटेक्टरों त्यहाँ विभिन्न डिजाइनहरू र फरक उद्देश्यहरू छन्। तिनीहरू धातु वा धातु वस्तुहरू पत्ता लगाउन प्रयोग गरिन्छ। खजाना शिकारीहरूको लागि, यी हुन् डिटेक्टरों धेरै लोकप्रिय। तिनीहरूले सक्षम पार्छन् ट्रयाक मेटाउनुहोस्यद्यपि यदि यो गहिरो भूमिगत माथि 50 सेन्टिमिटर सम्म दफाइएको छ। यो शायद खोज इन्जिन बिना कहिल्यै फेला परेन। यी यन्त्रहरूमध्ये धेरैले धातुको प्रजातिहरू पनि देखाउँछन् ताकि दृश्यदर्शकले चाँडै जान्छ कि खुवाइन्छ वास्तवमा सार्थक हो।
पोर्टेबल धातु डिटेक्टरों ह्यान्डल र माथिल्लो ओभरमा एक ह्यान्डल छ इकाई नियन्त्रण वा प्रदर्शन गर्नुहोस् बस्न। तल्लो प्लेट प्लेटको आकारमा कोणमा छ तार संलग्न। अनुकूलित आकारको कारण, कुंडल मैदानको नजिक हुन सक्छ। सुईको साथ एक डिस्प्लेले संकेत गर्दछ भने। एकै समयमा, एक अडियो सिग्नल पनि उत्सर्जन गर्न सकिन्छ, प्रयोगकर्ताले आफ्नो वातावरणमा अधिक ध्यान केन्द्रित गर्न र प्रदर्शनको निरन्तरता नदेखाउन अनुमति दिन्छ। टोन धातु प्रकार र आकारको आधारमा भिन्न हुन सक्छ। धातु डिटेक्टरों विभिन्न तरिकामा काम गर्न सक्दछ। विभिन्न विधिहरू मा आधारित छन् पीआई प्रविधी (पल्स प्रेरणा प्रविधी) वा सिद्धान्तमा एसी मापन।
बलियो चुम्बकीय दालका धाराहरूको पल्स-जस्तै उत्सर्जनको कारण इन्चनेशनल मेटलमा लगाइएको छ। जांच एक सिद्धान्त मा एक ट्रांसमीटर र एक रिसीभर मा छ, तर एकै समयमा दुवै गर्न सक्दैन। पहिलो, यसले चुम्बकीय दालहरू पठाउँदछ, त्यसपछि यसले विद्युतीय धाराहरू प्राप्त गर्दछ। यो प्रति 600 - 2.000 पटक बारेमा हुन्छ। चुम्बकीय दालहरू बलियो डीसी द्वारा उत्पन्न हुन्छन् जुन अन्त माउन्ट कुंडमा फैलिएको छ। संचयी धातुहरु को परिणामस्वरूप आचरण जांच द्वारा मापा छ। जांचको म्याग्दी हुन सक्छ काम गहिराइ बढाउनुहोस्, प्राप्त सिग्नल कुंडो माथि मिटरमा फेड गरिएको छ। ठूला धातु वस्तु ठूलो, मीटरमा बलियो हुन्छ। जांच को डिजाइन को संदर्भ मा, निर्माता मा पीआई प्रौद्योगिकी मा धेरै विकल्प छ। ठूलाहरूसँग धातु डिटेक्टरों आफैलाई दिनुहोस छोटो समयमा खोजी गर्नुहोस्।
AC वर्तमान मापन
मा धातु डिटेक्टरों, जो एसी मापन मा आधारित छ, डीसी एसी को स्थान मा प्रयोग गरिन्छ। यस अवस्थामा, ट्राफिक र रिसेप्शनको बीच कुनै स्विचिङ छैन, तर आयाम र चरण स्थिति बिना रुकावटको मापन गरिन्छ। यसले माटोमा भौतिक र आकारको उपाय गर्दछ। माथिल्लो मूल्य दायराको यन्त्रहरू एकै साथ गर्न सक्छन् फरक आवृत्ति दायराहरू कवर, अधिक सटीक र संवेदनशील नतिजाहरु।
धातु डिटेक्टरहरूको भिन्नता
विशेषतया लोकप्रिय डिटेक्टरों एक संग बडा ब्यान्डविड्थ, तिनीहरू माटो को तह को अधिकतर धातुहरु लाई संकेत गर्दछ। Beginners सामान्यतया एक विशेष धातुमा विशेषज्ञ छैन र त्यसैले तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् Allround उपकरण, तथापि, यी यन्त्रहरूको हानि यो हो कि तिनीहरूको उच्च ब्यान्डविथ उनको संवेदनशीलता कम हुन्छ। कडा गहिरो संकुचित बैंडविड्थ यन्त्रहरूको लागि भन्दा कम छ। यसले पनि अनुमति दिन्छ अधिक सटीक स्थानीयकरण साना वस्तुहरू पनि। केही प्रयोगकर्ताहरु प्राय: फरक डिटेक्टरहरू संलग्न हुन्छन्। त्यसैले तिनीहरू ठूलो क्षेत्रमा कुनै न कुनै खोजको लागि उपकरण प्रयोग गर्न र अधिक संवेदनशील यन्त्रको साथ खोजीमा सटीक स्थिति निर्धारण गर्न सक्षम छन्। त्यहाँ पनि छ धातु डिटेक्टरोंजो एक निविड़ अंधकार जांच छ। स्ट्रिमहरू वा नदीहरू वरिपरि तिनीहरू रुचाउँछन्। केही धातु डिटेक्टरों एक विशेष धातुको लागि अनुकूलित गरियो। त्यो मामला हो, उदाहरणका लागि सुनको लागि डिटेक्टरहरू.
जसरी प्रायः, मूल्यको गुणस्तर र कार्यक्षमतामा ठूलो प्रभाव छ। सस्तो मूल्य खण्डमा अधिकतर छन् धातु डिटेक्टरोंकि स्पार्टन सुसज्जित छ। महत्त्वपूर्ण प्रदर्शन विकल्प हो, प्राय: एक पोष्टको रूपमा डिजाइन गरियो। यसले तपाईंलाई प्रकारको धातु र वस्तुको आकार निर्दिष्ट गर्न अनुमति दिन्छ। साथै, सुई सूचकसँग वस्तुको सही स्थिति पनि निर्धारण गर्न सकिन्छ। प्रयोग गर्नु भन्दा पहिले, प्रदर्शनहरू सही मानहरूको लागि शून्यमा क्यालिब्रेटेड हुनु पर्छ। एक ईसंवेदनशीलता विश्लेषक (भेदभाव) उपस्थित हुनुहोस्। यसले विभिन्न जमीन परिस्थितिहरूलाई अनुकूलन दिन्छ। सस्तो यन्त्रहरू प्राय: ध्वनिक सिग्नल जनरेटरको आवाज नियन्त्रणलाई पनि अनुमति दिन्छ। यस प्रकारको प्रयोग मेटल डिटेक्टर शारीरिक रूपमा निकास नगर्ने, उपकरणको लम्बाइमा हेरचाह गर्नु पर्छ। छोटो यन्त्रहरूले ठूला मानिसहरूलाई बलियो मुद्रामा बलियो बनाउँछ जब जांच नजिकैको नजिकै हुन्छ। आदर्श रूपमा, सस्तो मूल्य क्षेत्रमा पनि उपकरणहरू छन्, जुन सीमित छन् व्यक्तिगत रूपमा लम्बाईमा समायोजन गर्नुहोस् छोड्नुहोस्। अर्को फाइदा जब खोज कोइल पनि परिवर्तन गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि, एउटा ठूलो कुंडलीसँग, भू-भागहरू प्रायः स्क्यान गर्न सकिन्छ। कुनै पनि खोजहरू अन्य coils संग सटीक स्थिति निर्धारण गर्न सक्षम हुनका लागि चिन्ह लगाउन सकिन्छ। केहि निर्माताहरू पनि तिनीहरूको प्रोग्राममा विनिमेन्ट कुंडहरू छन् वा अन्य निर्माताहरूबाट कोइल सञ्चालनको अनुमति दिन्छन्। कम-लागत मेटल डिटेक्टरको एउटा उदाहरण उदाहरणका लागि हो Seben Allround धातु डिटेक्टर को लागी 40 €।
Seben Allround धातु डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर संकेतक
सेबेनबाट मूल: सिद्ध र सफल मेटल डिटेक्टर
ध्वनिक र ओप्टिकल खोज टुक्रा प्रदर्शन
स्थान गहिराइ: अधिकतम। सैद्धांतिक खोज गहिराई 60cm (ठूला वस्तुहरू), अधिकतममा सिक्किमहरू। 15cm
केबल: भित्र (ताला लगाउन र ढिलो)
पनरोक "Seben Ultimate फोकस" खोज कोइल, 25 सेन्टिमिटर पानी गहराई सम्म उथाइ पानी खोज्न
Upscale मूल्य दायरा
यी यन्त्रहरूमा सामान्यतया एनालॉग प्रदर्शनको तुलनामा सुधारिएको एलसीडी डिस्प्ले छ। एक द्वारा प्रकाश समारोह यी यन्त्रहरू पनि उपयुक्त छन् गाढा वा कम प्रकाश अवस्थाहरू राम्रो। प्रदर्शन वस्तु र यसको स्थिति बारे थप सटीक डेटा प्रदान गर्दछ। यसको अतिरिक्त, उच्च गुणस्तर मेटल डिटेक्टरहरु लाई अक्सर एक छ Pinpointer, जसले अझ बढी सही परिणाम दिन्छ। हस्तक्षेपको लागी संवेदनशीलता, उदाहरणका लागि मोबाइल टेलिभिजन मास्टको आसपासमा, केहि उपकरणहरूमा पनि महत्त्वपूर्ण सुधार गरिएको छ। प्राविधिक डेटाको तुलनाले प्रदर्शनको बारेमा थप जानकारी प्रदान गर्दछ। नियमको रूपमा, राम्रो यन्त्रहरूमा पनि एक छ उच्च काम गर्ने गहिराइ। उच्च मूल्य दायरामा उदाहरणको लागि हो Bounty Hunter Discovery 3300 मेटल डिटेक्टर.
3300 धातु डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर 11 सेक्शन खोज पहिचान प्रदर्शन प्रदर्शन
7 खण्ड लक्ष्य दमन र3प्रकारको उन्नत फलाम भेदभावको साथ धातु पत्ता लगाउने। बिभिन्न खोज मोडहरू र4टोन-सिग्नल प्रतिक्रियाले 28 सेन्टीमिटरसम्मको गहिराइमा धातुत्मक फेला पार्दछ बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
संख्यात्मक लक्ष्य प्रणालीले वस्तु पहिचानको साथ मद्दत गर्दछ र अनावश्यक वस्तुहरू बटन थिचेर लुकाउन सकिन्छ। लक्षित प्रदर्शनहरूले फेला पार्ने प्रकारको बारे र यसमा अवस्थित गहराईको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
8 अनुकूलन खोज कोइल विनिमेय र वाटरप्रूफ हो। एर्गोनोमिकली आकारको, समायोज्य शाफ्ट र S-Rod ग्रिप डिटेक्टर पकड गर्न सजिलो बनाउँछ।
आयाम: 71,9x25,4x15,2 सेमी / वजन: 1,91 किलो; अपरेशनलाई 2x 9V-block ब्याट्री आवश्यक छ (समावेश नगरिएको)
वितरण को क्षेत्र: धातु डिटेक्टर; निर्देशन
स्पष्ट रूपमा पहिचान योग्य फाईलहरू
एक मेटल डिटेक्टर अन्य सामग्री अन्तर्गत लुकाइएका धातुहरू देखाउँछ। सबैले साना सहयोगीहरूलाई थाहा छ, जसले पर्खालमा पाइप र धातु पाइप देखाउँछ। उनीहरूले सही कोर्सलाई संकेत गर्दछ र यसरी पाइप र पाइपहरूमा अनियमित क्षतिलाई रोक्न, उदाहरणका लागि जब पर्दालाई पर्खालमा ड्रिल गर्न सकिन्छ। डिटेक्टरहरूको अर्को उदाहरण हो मेटल डिटेक्टरों पर्यवेक्षी अधिकारीहरु द्वारा, उदाहरण को लागि हवाईअड्डा मा। तिनीहरू धातुबाट बनेका हतियारहरू महसुस गर्छन्। सेना प्रयोग गर्दछ धातु डिटेक्टरों um खान, गोला बारुद, बम वा ग्रेनेड तल तल ट्रयाक गर्नुहोस्। वही कोर्स को अधिनियम क्लीनिंग सेवा को लागी लागू हुन्छ। खजाना शिकारीहरू, निस्सन्देह, धेरै फरक इरादाहरू छन्। तिनीहरू जरूरी हराएका खजानेहरूको लागि होइनन् तर मूल्यवान वा पुरानो केहि पनि छैन। एक प्राचीन गहना वा उपकरणमा उच्च भौतिक मूल्य नहुन सक्छ, तर यसलाई भाग्यको लायक हुन सक्छ। कहिलेकाहीँ, तथापि, तिनीहरूले वस्तुहरू जुन अट्टेसन क्लियन्सको क्षेत्रमा खसेका छन्। विशेष गरी दोस्रो विश्वयुद्धबाट नियमित रूपमा निर्माण स्थलहरू र वनहरूमा भेट्टाउन सकिन्छ। यस्तो मामलामा तुरुन्तै सक्षम अधिकारीहरूलाई सूचित गरियो हुन।
केही मानिसहरू एकै ठाउँमा आए मेटल डिटेक्टर, हराएका चीजहरू, जस्तै गहना, घडीहरू वा कार कुञ्जीहरू पाठ्यक्रमका साथ पनि मेटल डिटेक्टर राम्रो खोज्नुहोस्। रेतमा वा लामो घाँसमा समुद्री किनारमा टेक्निकल समर्थन बिना खोजी सधैंभरि लाग्न सक्दछ र धेरैले घण्टापछि खोजलाई जोगाउनेछ। फेरि, यो विशेष गरी पर्यटक समुद्र तटहरूमा केही आत्म-घोषित "खजाना शिकारीहरू" योजनामा ​​आशा मा, एक डिटेक्टर संग हराएको मूल्यवान वस्तुहरू खोज्न। चाहे "ईमानदार खोजकर्ता" को सफलता को मामला मा हो, एक खुला प्रश्न हो। यद्यपि, यसले प्रदर्शनको प्रदर्शन गर्दछ धातु डिटेक्टरों, निर्माण साइटहरूमा वा तपाईँको बगैचामा यस्तो उपकरण पनि सम्पत्ति हुन सक्छ। यदि जमीनमा धातु पाइप वा केबुलहरू निश्चित रूपमा चिनिँदैन भने, डिटेक्टरले गम्भीर क्षतिबाट पार्थिव क्षतिको प्रतिरोध गर्दछ। एक संभावित प्रयोगकर्ताहरूको अर्को समूह मेटल डिटेक्टर प्रदान meteorite शिकारी पृथ्वीमा हिँड्ने थुप्रै उल्का उल्टाहरू धातुको कोर हो। यी प्राय: ग्राउन्ड आवरण तह तल केही इन्च र भेट्टाउनको लागि पर्खिरहेका हुन्छन्। केहि मान्छे यति धेरै सफल छन् कि उनि पनि मिलेका meteorites को बिक्री मा रहन सक्छन्।
एक खजाना शिकारी को रूप मा कुनै पनि मामला मा लिया जाना चाहिए, खोज मा वर्तमान कानूनी स्थिति। यो क्षेत्रीय रूपमा धेरै फरक हुन सक्छ र उल्लङ्घनको लागि गम्भीर दण्डहरू हुन सक्छ।
पानी मा पानी र पानी को तहत शिकार
धेरै मेटल डिटेक्टरहरूको लागि, जाँच निवारण छ। यसरी, नदी किनारमा प्रयोग पनि उपयुक्त छ। नदीहरू र तिनीहरूका सहायकहरू प्राय: पहाडहरूमा जन्माउँछन्। यसैले एक नदी धेरै धातुहरु को लागि एक ट्राभल सिस्टम हो। केहि मान्छे नदियों देखि सोने को खडा गर्छन। एक मेटल डिटेक्टर विशेष गरी जब ठूलो खोज्दै सुन rags धेरै सहयोगी हुनुहोस्। तर पनि प्राचीन सिक्का वा अन्य वस्तुहरू प्राय: नदीहरूमा पाइन्छ। तिनीहरू प्रायः देखिन्छन् सख्त जहाजहरू, निस्सन्देह, यो विशेष गरी महासागरहरूमा लागू हुन्छ। खजाना शिकारीहरू र पुरातत्वविद्हरू पनि प्रयोग गर्दछन जल मेटल डिटेक्टरहरू, अक्सर यो धुलो भत्किएको छ, जुन जहाज जहाजमा पुग्ने पहिलो हो। तिनीहरूले सयौं वर्षको लागि अन्त्य गरे र, उनीहरूका आकार र मात्राको कारणले, स्तर सूचकको एक बलियो ढोका प्रदान गर्दछ। निस्सन्देह यी विशेष हुन् धातु डिटेक्टरों को लागि पानी प्रयोग डिजाइन।
एक रोचक र विविध शौकको रुपमा धातु डिटेक्टर
एक बाट मेटल डिटेक्टर चाँडो एक आकर्षण हुन सक्छ। यसलाई सम्भव छ लुकेको चीजहरू पत्ता लगाउन। यीमध्ये धेरै चीजहरू पहिले नै पुरानो हो, त्यसैले तिनीहरू समयको साथ पृथ्वीद्वारा दफन गरिएका छन्। तिनीहरूलाई फिर्ता दिनको लागि ल्याइदिनु र तिनीहरूका उत्पत्तिहरूको बारेमा सोच्नु धेरै मानिसहरू प्रभावित भएको छ रोचक शौक दिइएको। समूहहरू वा परिवारहरूको लागि यो एक राम्रो अवकाश समय मजा पनि हुन सक्छ। निस्सन्देह, धेरै व्यक्तिले धेरै ठूला क्षेत्रहरू स्क्यान गर्न एकै पटकमा धेरै मेटल डिटेक्टरहरू प्रयोग गर्न सक्छन्, जुन निश्चित रूपमा एक खजाना ट्रक फेला पार्नका लागि समस्या बढ्छ। अर्को संस्करण सम्भवतः उच्च गुणस्तरको संयुक्त खरिद हो मेटल डिटेक्टर। त्यसैले प्रत्येक व्यक्तिको मूल्य यति उच्च छैन र तपाईं प्रदर्शन र गुणस्तरमा सम्झौता गर्न छैन। त्यहाँ थुप्रै फोरमहरू विषयसँग सम्बन्धित छन् धातु डिटेक्टरों वा खजाना शिकार। यहाँ तपाईं महत्त्वपूर्ण जानकारी आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र धेरै सुझावहरू छन्। एउटा साधारण समस्या खोजको मान निर्धारण गर्दैछ। त्यसोभए मूल्यवान मुल्य अपेक्षाकृत बेकार हुनुको लागी देखिन्छ। अर्कोतर्फ, लगत्तै लापरवाही चीज पुरातत्वविद्हरूका लागि धेरै बहुमूल्य हुन सक्छ। स्थानीयतालाई सम्भवतः सही रूपमा ध्यान दिनुपर्दछ, किनकि केहि अन्य आश्चर्य लुकेको हुन सक्छ, भले यो धातुको बनाइएन।
खोजी उपकरणहरूको सही प्रयोग
सबै टेक्निकल यन्त्रहरूको रूपमा, पहिलो पटक यसको प्रयोग गर्नु अघि यो परिचित हुनु महत्त्वपूर्ण छ। केहि छैन को लागी तपाई प्याकेजिङ्गमा निर्माताको मनुष्यहरू पाउनुहुनेछ। मा मेटल डिटेक्टर यदि तपाइँको आफ्नै सम्पत्तिमा सम्भव छ भने एक अभ्यास क्षेत्र सिर्जना गर्न सल्लाह छ। यदि तपाईंले तेस्रो-पक्षको भूमिमा खोज्नु भयो भने, मालिकबाट लिखित सहमति छ। यो विभिन्न वस्तुहरू भुइँमा सुरू गर्न उत्तम छ। फरक गहिराइको प्वाल खोल्नुहोस्। तपाईं लाई बेकार धातु, तर वास्तविक गहने र सिक्का पनि प्रयोग गर्न को लागि। स्थानहरू चिन्ह लगाउनुहोस् जहाँ तपाईंको "खजानेहरू" भूमिगत छन्। अब खोज सुरु गर्नुहोस् र महत्त्वपूर्ण अनुभवहरू एकत्र गर्नुहोस्। यस तरिकामा प्रभावकारिता र प्रदर्शन तपाईंको मोडेल राम्रोसँग निर्धारण गर्नुहोस्। तपाइँलाई पनि थाहा छ कि तपाइँको खोजीकर्ता कुनै दोष नभएको काम गर्दछ। यसमा महत्त्वपूर्ण प्रकार्य समावेश छ विवेक, आदर्श रूप मा, यो जमीन मा बेकार धातु को खोज सुनिश्चित गर्दछ। आफ्नो समय लिनुहोस् र आफैलाई दबावमा राख्नुहोस्। सानो अभ्यासले इष्टतम प्रयोगको अनुमति दिन्छ मेटल डिटेक्टर। तपाईंले आफूलाई दफन गरेको कुराहरू फेला पार्न पछि के तपाइँ आश्चर्यजनक भेट्टाउन सक्नुहुन्छ तपाईलाई पहिले नै आफ्नो माटो खोज्नु हो। कसलाई थाहा छ, सायद तपाईं एक वास्तविक खजाना खोज्दै हुनुहुन्छ। तथापि, पहिलो बारेमा पत्ता लगाउनुहोस् कानुनी प्रावधानहरू र खजाना शिकार मा प्रतिबंध। आफ्नै साथ मेटल डिटेक्टर महान आउटडोर मा एक खजाना को शिकार मा जाने को लागि सामान्यतया व्यक्तिहरुलाई अनुमति दिइएको छ। मूल्यवान खोजहरू कर-फ्रि हुन्, तर त्यहाँका प्रतिबन्धहरू छन् जुन विचार गर्नुपर्दछ। यसरी, महत्त्वपूर्ण पत्ताहरू सम्बन्धित संघीय राज्यमा जान सकिन्छ। राज्य देखि राज्य यहाँ झूटो छ विभिन्न विधान पहिले।
बालबालिकालाई धातु डिटेक्टरसँग असुरक्षित नदेखाइनु हुँदैन। जंगल वा मेडवेमा द्वितीय विश्वयुद्धको बिरुवा खोज्ने खतरा धेरै ठूलो छ।
डीलरमा इन्टरनेट वा साइटबाट किन्नुहोस्?
तपाईं कहाँ चाहनुहुन्छ? मेटल डिटेक्टर किन्न? तपाईं अझै पनि स्थानीय व्यापारी वा एक मा विचार गरिरहनु हुन्छ अनलाइन रिटेलर इन्टरनेटमा किन्न सकिन्छ? हामी यी महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्न मद्दत गर्न खुशी छौं। हाम्रो जानकारी प्रयोग गर्नुहोस् ताकि तपाईं गलत निर्णय गर्न चिन्ता गर्नुपर्दैन। दुवै विकल्पमा फायदे र हानि छ।
विशेषता पसल किन्नुहोस्
निर्णय पछि मेटल डिटेक्टर धेरै खरीददारहरू खरिद गर्न आफ्नो क्षेत्रमा खुदरा विक्रेता खोज्छन्। तपाईं निश्चित रूपमा एहसास गर्नु पर्छ, शौक खजाना शिकारीहरुको लागि यो एक पसल खोज्न गाह्रो छ। यसको कारण यो शौकको लागि कुनै विशेष पसलहरू छैनन्। तपाइँ प्रायः सम्भावित कुराहरू पत्ता लगाउनुहुनेछ जुन तपाईले हेर्नु भएको छ कि तपाईले बाह्य पसलहरू र हतियार पसलहरूमा खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। को लागि मांग को रूप मा डिटेक्टरों यी विशेष पसलहरूमा दुर्लभ होइन, कुनै पनि ठूलो वर्गीकरण दायराहरूको आशा गर्न सकिन्छ। एकको फाइदा मेटल डिटेक्टर सिधा साथ लिन सक्षम हुन, धेरै सानो चयन द्वारा क्लाउड गरिएको छ। प्रबन्धन निर्देशकहरू एक ठूलो आचरण जोखिम जोखिम कारकको रूपमा देख्दछन्, किनभने मांग सीमा भित्र रहन्छ। त्यसैले त्यहाँ अनुभवहीन खजाना शिकारीको लागि थप मोडेलहरू छन्। बिक्री कर्मचारी कहिलेकाहीँ एक साँच्चै पेशेवर सल्लाह संग अचम्म लाग्दछ। केहि अवस्थाहरूमा यो स्वचालित रूपमा गोदाममा अवस्थित मोडेल बेच्न प्रयास गरिन्छ। मूल्यहरू प्राय: इन्टरनेटमा भन्दा बढि छन्। एक विशेष स्टोर बाट खरीद गर्दा, तपाईंलाई खरिदमा धेरै खाली समय खर्च गर्न आवश्यक पर्दछ। त्यहाँ पुग्दै, पार्किङ स्पेस फेला पार्दै र परामर्शको लागि पर्खेर तपाईंको सबै समय र पैसा लिन्छ। यहाँ पहिले नै इन्टरनेटमा खरिद गर्ने फाइदाहरू छन्।
इन्टरनेटमा खरिद गर्नुहोस्
एक सपिङ्ग खरीदारीको लागि इन्टरनेट उपलब्ध छ। शान्त र शान्तमा, तपाईं घरमा के चाहानुहुन्छ कि खरीद गर्न र तिर्न सक्नुहुन्छ। विशेष गरी काम गर्ने व्यक्तिहरूले यो लक्जरीको प्रशंसा गर्छन्। पसलहरु को शुरुवात घन्टा धेरै काम गर्ने संभावनाहरु संग स्थान मा खरीद लगभग असंभव। लाभकारी इन्टरनेट हो, खुदरा विक्रेताहरूको विपरीत, मेटल डिटेक्टरहरूको धेरै राम्रो चयन। तपाईले गर्नु पर्छ सबैले आफ्नो छनौटको एकरूपता धेरै ठाउँमा छ, र तपाइँको प्रत्याशा बढ्न सक्छ। केही पसलहरू अर्डर पछि तुरुन्तै जहाज, एक्सप्रेस शिपिङको रूपमा समेत। यदि एक मोडेल स्टकमा छैन भने, यो तुरुन्तै तपाईंलाई प्रदर्शित हुनेछ। मूल्यहरू पनि धेरै आकर्षक छन्। एक मेटल डिटेक्टर सम्झौता सहजै भेट्न सकिन्छ। अर्को विश्वासयोग्य फायदा सामानको चयन हो। तपाई भेट्टाउनुहोस् ब्याट्री, विशेष Tote बैग र spool को लागि अनलाइन पसल मा मेटल डिटेक्टर पहिले।
बिजुली आपूर्तिमा खरिदमा ध्यान दिनुहोस्। धेरै यन्त्रहरू बैटरीद्वारा संचालित हुन्छन्। यदि एक चार्जर समावेश गरिएको छैन भने, यसलाई अलग देखि खरिद गर्नुपर्छ। सञ्चालन समय ब्याट्री क्षमता र धातु डिटेक्टरको पावर उपभोगमा निर्भर गर्दछ। यो खरिदमा विचार गर्नुपर्छ। लामो प्रयोगको लागि, थप चार्ज ब्याट्री उपयोगी हुन सक्छ।
खजाना हेर्न कहाँ छ?
der मेटल डिटेक्टर निस्सन्देह, लामो दौडमा, यदि एक वा अन्य खजाना साँच्चै भेटिन्छ भने यो मात्र मजा छ। जहाँ पनि तपाइँले कुनै कुरालाई बताउन सक्नुहुन्न, तर केहि क्षेत्रहरू र कामहरू अरू भन्दा बढी प्रतिज्ञाजनक छन्। हामी तपाईंलाई केहि विचारहरु संग खोज्न चाहन्छौं जसको खोजीमा धन वेक्षक सफलताको लागि खडा हुन सक्छ:
खोज क्षेत्रहरूमा सफल छ। यहाँ खोलिएको छैन सामान्यतया यति निकास।
पुराना र ठूला रूखहरूमध्ये, हाम्रा धेरै पुर्खाहरू अतीतमा आराम गर्न एक ठाउँ भेटिए
पहिलेको युद्धक्षेत्रमा खोजको लागि अवसर धेरै राम्रो छन्। रोमन 1 बाट खोज र वस्तुहरू। र 2। द्वितीय विश्वयुद्ध II यी स्थानहरु मा सबै भन्दा साधारण पाईन्छ।
पुरानो पुल अन्तर्गत तपाईं रोमन सिक्का पाउन सक्नुहुन्छ। रोमीहरू यहाँ रोकिए र उनीहरूको घोडाहरू ताजा पानीले प्रदान गर्थे।
नदी स्नान, झीलहरू र समुद्र तटहरू गहना र सिक्काको लागि हुन्।
सफल खजाना शिकारहरूको लागि अवलोकनस्पदहरू, पुरानो मिलहरू, बोगहरू, चट्टानहरू र भान्साहरू पनि उत्कृष्ट छन्।
महलहरू र खण्डहरूदेखि रहनुहोस्! यहाँ प्राय: अनुमति अनुमति हो।
धातु डिटेक्टरहरू - वयस्क र बच्चाहरूको लागि SUNPOW उच्च-सटीक धातु डिटेक्टर, समायोज्य प्रकाश, सटीक प्रकार्य र DISC मोडको साथ LCD डिस्प्ले, २ cm..25,4 सेन्टीमिटर वाटरप्रूफ खोज कोइल डिस्प्ले
DISC मोड र अद्वितीय अडियो: OT-MD03 धातु डिटेक्टरले विभिन्न प्रकारका धातु वस्तुहरू भेट्टाउन सक्छ जस्तै फलाम, एल्युमिनियम, सुन, कास्य, चाँदी र उनीहरूको वस्तुहरू सबै धातु मोडको साथ। तपाईं स्पष्ट प्रकारको अडियोको साथ धातुको प्रकार भिन्न गर्न सक्नुहुनेछ र पत्ता लगाउने क्षमता सुधार गर्न DISC दायरा समायोजन गरेर जंक धातुलाई वेवास्ता गर्नुहोस्। २ V V क्षारीय ब्याट्रीहरू आवाश्यक हुन्छन्।
LCD नियन्त्रण बाकस: बत्ती बन्द गर्नाले विद्युत खपत कम गर्दछ र उत्पादको आयु विस्तार गर्दछ। ठूलो LCD स्क्रिनले मोड, संवेदनशीलता, ब्याट्री स्थिति, खण्ड र लक्ष गहिराई स्पष्ट रूपमा देखाउँदछ। सूचक मेटल डिटेक्टर भन्दा बढी सटीक।
पिनपोइन्ट प्रकार्य र उच्च गहिराइ: सबै मेटल मोडमा लक्ष्यको अनुमानित दूरी पुष्टि गरेपछि, तपाईं पी / पी प्रकार्य लक्ष्य प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। भोल्युम स्तर र प्रदर्शन आइकन लक्ष्यको गहिराइ निर्धारित गर्न सक्दछ। PINPOINT FUNCTION मोडमा पत्ता लगाउने गहिराई २० सेन्टीमिटर हुन्छ।
२.25.4..25.4 सेन्टीमिटर वाटरप्रूफ खोज कुण्डल: २.XNUMX..XNUMX सेन्टीमिटर वाटरप्रूफ कोइलमा उच्च संवेदनशीलता छ। वाटरप्रूफ डाँठ र स्पूलहरूले तपाईंलाई पानीमुनि हेर्न अनुमति दिन्छ। आउटडोरका लागि उत्तम, जस्तै समुद्र तट, स्ट्रिम, आंगन। (नोट: नियन्त्रण बक्स वाटरप्रूफ छैन)।
ग्यारेन्टी: हामी नि: शुल्क प्रस्ताव र २ बर्षे वारंटी प्रदान गर्दछौं। पूर्ण रूपमा कुनै जोखिम खरीद छैन! यदि तपाईंसँग कुनै समस्या वा प्रश्नहरू छन् भने, हामीलाई अमेजन मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईंलाई सन्तुष्ट पार्न यथाशक्य कोशिश गर्नेछौं! प्याकेज सूची: १ x मेटल डिटेक्टर, १ x फावड़ा, १ x उपयोगकर्ता म्यानुअल, १ x ठूलो क्यारी। केस। हेडफोन ज्याक (2. mm मिमी) हेडफोनको जडान सक्षम गर्दछ (समावेश गरिएको छैन)।
BUKI KT7020D - मेटल डिटेक्टर सूचक
एक धातु डिटेक्टर जुन सबै प्रकारका फेलाहरूबाट वास्तविक खजाना जम्मा गर्न प्रयोग गर्न सकिन्छ
डिटेक्टरसँग LC डिस्प्ले र भोल्युम नियन्त्रणको साथ एक ध्वनि प्रकार्य छ
खोज संवेदनशीलता समायोज्य छ
9V ब्याट्री (LR61) आवश्यक छ, समावेश गरिएको छैन
रंग इलस्ट्रेटेड निर्देशनहरू। 8 वर्ष पुरानो बाट
वयस्क / बच्चाहरूको लागि ओएमएमओ मेटल डिटेक्टर, पिनपोइन्ट, डीआईएससी र समायोज्य संवेदनशीलताको साथ, एलसीडी डिस्प्लेको साथ सुन पत्ता लगाउने, वाटरप्रूफ सर्च कोइल, हेडफोनसहित, केस केस इत्यादि प्रदर्शन।
Genauigkeit उच्च शुद्धता र समायोज्य संवेदनशीलता। OMMO मेटल डिटेक्टरको एक पिनपोइन्ट प्रकार्य छ जुन अरू कुनै मेटल डिटेक्टरमा छैन। जब तपाइँ पिनपोइन्ट बटन थिच्नुहुन्छ, खोजी क्षेत्र घट्छ, सही पोइन्ट जहाँ खजाना अवस्थित हुन्छ, र अनुमानित गहिराई प्रदर्शित हुन्छ। उपकरणले निरन्तर स्वर निकाल्छ। २ cm सेन्टीमिटर खोज कोयल जलरोधक छ, यसको संवेदनशीलता समायोज्य छ
All "सबै धातुहरू" र DISC का मोडहरू back ठूलो ब्याकलिट प्रदर्शनले विभिन्न चुम्बकीय, प्रवाहकीय धातुहरू देखाउँदछ र स्क्रिनमा बिभिन्न आइकनहरू छन्। ग्राफिक डिस्प्लेको साथसाथै, उपकरणले विभिन्न धातुहरूको लागि छोड्ने स्वर पनि भिन्न हुन्छ। DISC मोडमा तपाईं बिभिन्न विकल्पहरू चयन गर्न सक्नुहुनेछ र बेस धातुहरू समावेश गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसोभए तपाईं सिक्का, हराएको औंठी र चाँदी र सुनको खोजी गर्न सक्नुहुनेछ
【लामो समायोज्य ह्यान्डल, वाटरप्रूफ खोज कोइल】 ह्यान्डल 76 104 सेमीदेखि १०XNUMX सेमी सेन्जुल गर्न सकिन्छ र यसैले सँधै तपाईंलाई आरामदायी काम गर्ने मुद्रा प्रदान गर्दछ, चाहे तपाईं जतिसुकै ठूलो भए पनि। वयस्क र बच्चाहरू सजिलैसँग मेटल डिटेक्टर प्रयोग गर्न सक्दछन्। ह्यान्डल र खोज कुण्डल वाटरप्रूफ हो, त्यसैले तपाईं समुद्री तटमा हराएको वस्तुहरूको लागि पनि स्ट्रिमहरू वा पोखरीमा खोजी गर्न सक्नुहुनेछ। कृपया ध्यान दिनुहोस् कि प्रदर्शन वाटरप्रूफ छैन
【हेडफोन र समायोज्य भोल्यूम】 मेटल डिटेक्टरसँग हेडफोन ज्याक प्लगहरूको लागि mm. mm एमएम अडियो ज्याक छ। हेडफोनहरू समावेश छन्। सेलफोन हेडफोन पनि यहाँ फिट हुन्छ। हेडफोनलाई धन्यवाद, तपाईं हल्ला वातावरणमा खजाना खोज्न सक्नुहुन्छ - व्यस्त सडकमा वा व्यस्त समुद्र तटहरूमा। यो तरिका तपाईं अव्यवस्थित रहनुहुन्छ र तपाईंको खोजीमा ध्यान दिन सक्नुहुन्छ। भोल्यूम समायोज्य छ
【प्रयोगकर्ता-अनुकूल उपकरण】 मेटल डिटेक्टर हल्का वजनको छ, जम्मा गर्न सजिलो छ, र आर्मेरेस्टको अनौंठो एर्गोनोमिकली घुमाउरो आकारले लामो अवधि प्रयोग गरे पछि पनि तपाईंलाई थाक्ने छैन। प्रयोगकर्ता मैत्री नियन्त्रण र एक ब्याट्री स्तर सूचक संग। एक फोल्डिंग कुदाल साथै हेडफोन, एक उपयुक्त 9V ब्याट्री र एक वाहक केस शामिल छ। एक्लै वा तपाईंको परिवारसँग समयको आनन्द लिनुहोस्!
बाउन्टी हन्टर लोन स्टार प्रो मेटल डिटेक्टर मेटल डिटेक्टर9खण्ड लक्षित पहिचान प्रदर्शनको साथ
लोन स्टार प्रो एक उच्च गुणवत्ताको डिटेक्टर डिजिटल टच डिस्प्ले र विस्तृत मेटल डिटेक्टर क्षमतासहितको छ। यसको संवेदनशील कुण्डल को लागी धन्यवाद, लगभग सबै धातुहरू पत्ता लाग्यो। धातु खोजहरू 20 सेमीको गहिराईमा अवस्थित छन्, ठूला वस्तुहरू 60 सेमी गहिराइसम्म।
डिटेक्टरले सबै प्रकारका धातुहरू भेट्टाउँदछ र भेदभाव समारोहले अनावश्यक धातुहरू लुकाउन र खोजीको लागि सुविधा प्रदान गर्दछ। थप कार्यहरू लक्षित वस्तु पहिचान, ग्राफिकल गहिराइ प्रदर्शन र एक निशान प्रकार्य हुन्
गाढा 8 ईन्च खोज कुण्डल वाटरप्रूफ हो र जमिनमा विश्वसनीयताका साथ पत्ता लगाउँदछ। डिटेक्टरसँग ब्याट्री स्तर सूचक, बिल्ट-इन स्पिकर र हेडफोन ज्याक पनि छ। शाफ्ट लम्बाई आरामदायी ह्यान्डलिंगको लागि नियमन गर्न सकिन्छ।
आयाम: 114,3x20,3x35,6 सेमी / 1,09 किलो; अपरेशनलाई 1x 9V-block ब्याट्री आवश्यक छ (समावेश नगरिएको)
Metalldetektor Hochpräzises,FLOUREON Metallsuchgerät wasserdichtes LCD-Display Pinpoint Funktion, 10-Zoll-Suchspule, Gold Silber Metalldetektoren inklusive Faltschaufel Kopfhörer & BatterieAnzeige
【3 Modes 】-Dieser Metalldetektor hat drei Modes zur Auswahl. All Metall Modus- Der Metalldetektor benachrichtigt Sie, wenn er Metall erkennt. Disc Modus- Sie können diesen Metalldetektor verwenden, um bestimmte Metallarten zu unterscheiden, wie Eisen, Zink, Münze usw. Pinpoint –das Metallsuchgerät mit Dieser Modus unterstützt die Erkennung von Metallen durch Piepen.
【Hyper Digital Display】- 20% größerer LCD-Bildschirm, mit dem Sie versteckte Metalle finden können. Durch die neun Helligkeitsanpassungseinstellungen dieses Metalldetektors können Sie ihn in verschiedenen Situationen verwenden. Hinweis: Im Lieferumfang sind zwei 9-V-Batterien enthalten.
204 पृष्ठहरू - 07.10.2019 (रिलिज मिति) - स्वतन्त्र रूपमा प्रकाशित (सम्पादक)
केकेमून प्रो पोइन्टर मेटल डिटेक्टर पूर्ण जलरोधक जीपी पोइंटर जीपीएक्सएनयूएमएक्स उच्च संवेदनशील सबै धातु गोल्ड फाइन्डर नयाँ इलेक्ट्रोनिक मापन उपकरण प्रदर्शन
ब्रेसलेटको साथ सुधारिएको संस्करण।
उच्च गुणवत्ताको जीपी पोइन्टर कुनै सम्मानित डिटेक्टरिस्टका लागि अपरिहार्य उपकरण हो। हाम्रो वास्तविक परीक्षण द्वारा, यो लगभग मूल डिटेक्टर जस्तै ठीक काम गर्दछ, कृपया निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईं यसलाई खरीद गर्दै हुनुहुन्छ।
यस मोडेलले हल्ला र कम्पन उत्पादन गर्दछ, तर मेटलको उपस्थितिमा गतिहीन रहँदा सधैं आवाज र कम्पन हुँदैन, र यो डिटेक्टर खोल्दा यो बिप हुँदैन।
यस सानो, लाइटवेट उपकरणले सटीक ट्र्याकिंग प्रयोग फेला पार्दछ को पुन: प्राप्ति गति बढाउन। यो विभिन्न प्रकारका शिकार परिस्थिति अन्तर्गत साना चीजहरू पुनः प्राप्त गर्नका लागि आदर्श हो, भारी खनिजयुक्त माटोबाट नुन पानीको संतृप्त बालुवाका लागि।
योसँग श्रव्य र कम्पन हुने अलार्महरू धातु वस्तुहरूको उपस्थितिलाई संकेत गर्दछ। GP-POINTER धातुको लक्ष्यमा पुग्दा अलार्मको तीव्रता बढ्छ।
जुनजुन्ली बच्चाहरू मेटल डिटेक्टर सजिलो-प्रयोग गर्न बच्चाहरू र शुरुआतीहरूको लागि श्रब्य अलार्म, हल्का वजन, वाटरप्रूफ कोइल (ब्याट्री समावेश नगरी) प्रदर्शनका लागि
यो MD-1008A मेटल डिटेक्टर एक रोमाञ्चक नयाँ शौकको सुरूवात हुन सक्छ। यो हराएको वा हराएको सिक्का, गहना र अन्य धातु आईटमहरू फेला पार्न प्रयोग गर्न सकिन्छ।
बच्चाहरू र शुरुआतीहरूको लागि सजिलो-प्रयोग गर्न LCD मेटल डिटेक्टर, कम आवाज, हल्का वजन, वाटरप्रूफ ट्रेजर शिकार स्पूल, फायर र निलो वा कालो विकल्प सहित जूनियरको लागि उपहार।
तपाईले धेरै बोतल क्यापहरू, धातु पुल ट्याबहरू र पन्नी प्याकेजि find पनि फेला पार्नुहुनेछ। यो मेटल डिटेक्टरसँग उच्च संवेदनशीलता छ। MD-1008A भन्दा फरक, ह्यान्डल बच्चाहरूको लागि अधिक उपयुक्त छ।
अनुप्रयोगहरू: विज्ञान शिक्षा, अभिभावक-बाल गतिविधि, सरल धातु पत्ता लगाउने
नोट: ब्याट्री उत्पादनमा समावेश गरीएको छैन र ग्राहकले उत्पादन प्राप्त गरेपछि ब्याट्री किन्नुपर्दछ।
धातु डिटेक्टर, एम्जेडियल प्रोफेशनल मेटल डिटेक्टर उच्च संवेदनशीलता सहित जलरोधक खोज कोइला + मल्टि-फंक्शन फोल्डिंग फावानी + हेडफोन समर्थन प्रदर्शन
S उच्च सेन्सिटिभिटी फंक्शन】 कन्ट्रोल लाइट र सिग्नल टोन धातु डिटेक्टरमा अवस्थित छन्। कुण्डली पृथ्वीको मुनि दफन गरिएको धातु वस्तुको नजिक पुग्ने बित्तिकै, तपाईंलाई यसको तुरन्तै बीपहरू र प्रकाशको प्रकाश द्वारा सम्झना गराइनेछ। एमज्डियल मेटल डिटेक्टरको उच्च संवेदनशीलताले तपाईंलाई राम्रो खोज अनुभव प्रदान गर्दछ।
हामी दुई खोज मोडहरू - यस अज्ड्डियल धातु डिटेक्टरमा सबै धातु मोड र डिस्सी मोड छन्। सबै धातु मोडले तपाईंको लागि सबै धातुहरूको लागि खोजी गर्न सक्दछ। डिआईएससी मोडले स्वचालित रूपमा सबै धातुहरूबाट कम-मान धातुहरू निकाल्न सक्छ, तपाईंलाई बढी समय बचत गर्न। उच्च गुणवत्ता धातुहरूको लागि खोजीको लागि बचत गर्नुहोस्।
【.85.55【..115-११85.55 सेमी एड्जस्टेबल बार】 बारमा able 115..33.5 -११45.3 सेमी (.XNUMX XNUMX..XNUMX देखि .XNUMX XNUMX. inches इन्च) बीच समायोज्य उचाइ छ। फराकिलो समायोज्य उचाईको कारण, तपाईं सबैभन्दा सहज आसनको साथ उपकरण प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ। थप रूपमा, स्पूलको कोण समायोज्य छ र दुबै जलरोधक छन्। तपाईं आफ्नो बच्चाहरूसँग थोरै पानीमा वा समुद्र तटमा धातु वस्तुहरूको लागि खोजी गर्न सक्नुहुन्छ।
A व्यावहारिक डिजाइन】 VOLUME / SENS (संवेदनशीलता) / DICS (भेदभाव) नियन्त्रण गर्न practical बटनहरू छन्, अधिक व्यावहारिक। तपाईं पनि गडबडीको बिना मेटल डिटेक्टरको हेडफोनको माध्यमबाट चोर आवाजमा आवाज सुन्न सक्नुहुन्छ।
AC प्याकेज सूची】 1 * आर्मेरेस्टको साथ धातु डिटेक्टर मुख्य एकाई; १ * एक्स्टेन्शन एल्युमिनियम ट्यूबको साथ खोज कुण्डल; १ * मल्टिफंक्शन फोल्डिंग बाल्टिन; १ * बोकेको केस; १ * उपयोगकर्ता पुस्तिका।
दर्जा: 3.0/ 5।3चुनावबाट।
अघिल्लो लेखरोबोमा 980 द्वारा iRobot
अर्को लेखइस्त्री स्टेशन